Blogger of this week: Swapan Pradhan - MeroReport
Blogger of this week: Swapan Pradhan
पुल्चोकमा बस्ने स्वपन प्रधान रेडियो कार्यक्रम साथीसँग मनका कुराको वेव प्रोडुसर हुनुहुन्छ । उहाँ सुचना प्रबिधी र सामाजिक मिडियाको बारेमा ब्लग लेख्न रुचाउनुहुन्छ । घुम्न र कम्प्युटर प्रबिधीमा रमाउन मन पराउने स्वपन यस साता मेरो रिपोर्टमा साताका ब्लगर हुन सफल हुनुभएको छ । संधैका साताका ब्लगरसंग जस्तै यसपाली हामीले स्वपनसँग पनि ब्लगिङ र मेरोरिपोर्टका बिषयमा कुराकानी गरेका छौँ।
मैले २००९ देखी ब्लगिङ गर्न थालेँ । मैले आफ्नो बाइकिङ गर्दाको अनुभव व्यक्त गर्नको लागि ब्लगिङ शुरु गरेको थिएँ ।
म टेक्नोलोजी र सुचना प्रबिधीको बारेमा काम गर्ने भएकोले मेरो ब्लग यही बिषयमा आधारित हुने गर्दछ ।
म जुन बिषयमा पनि ब्लगिङ गर्छु । यसमा मात्रै गर्छु भनेर सिमित हुँदिन । म के बिस्वास राख्छु भने ब्लगिङ आफुलाई व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो चाहे त्यो जुन सुकै बिषयमा होस ।
यो बाह्य संसार नियाल्ने एउटा राम्रो प्लाट्फर्म हो, त्यसैले यसलाई सही तरिकाले उपयोग गर्नु पर्छ ।
छ । जब मैले ब्रायन आडम्स नेपाल आउने कुरा मेरो ब्लगमा लेखेको थिए, मेरो ब्लग ग्लोबल सर्च इन्जिनमा चर्चित भएको थियो ।
तपाइलाइ पनि थाहा होला, यतिबेला हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन, तपाइलाइ के लाग्छ, के यो जरूरी छ?
मेरो बिचारमा ब्लग भनेको आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने ठाँउ हो । कुनै पनि बिषयमा लेख्दा त्यसमा पाठकहरुको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रतिकृया हुने गर्दछ । आचारसंहिता राम्रो कुरा हो, तर म स्वतन्त्र हुदिन र फेरी फर्केर स्कुल गए जस्तो लाग्छ जहाँ धेरै नियमहरु पालना गर्नु पर्छ ।
मेरोरिपोर्टले आफ्नै अवधारणमा केन्दृत भएर काम गर्नु पर्छ । मेरो बिचारमा हरेक नागरिकको आफ्नो बिचार व्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसैले मेरोरिपोर्टको पहुँच देशका सबै नागरिकसम्म हुनु पर्छ ।
स्वपन प्रधानको ब्लगलिन्क :Swapan Pradhan
Comment by Shaku Limbu on November 17, 2011 at 3:21am
Comment by Kranti Darai on November 16, 2011 at 10:59pm
Congrats Swapan ..
Comment by Ajeeta Sigdel on November 16, 2011 at 4:35pm
Congratulations Swapan !!
Comment by Rupen on November 16, 2011 at 4:13pm
Congratulation Swapan. Hope to see some contribution from your side.